Amanyathelo ama-3 kwimpumelelo yoPhuculo lweMithombo yeendaba kwi-Intanethi | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 15, 2012 NgoLwesibini, Novemba 13, 2012 Douglas Karr
Sibe nengxoxo emnandi noSteve Kleber waseKleber & Associates, iarhente egxile kwicandelo lokwakha ikhaya. Esinye sezihloko ebekuxoxwa ngazo kukoyika ukuba iinkampani kufuneka zoyise xa zijongana nemithombo yeendaba. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa kusenzeka intlekele- kungcono ukuba ngaphezulu kwempendulo yakho kwimidiya yoluntu kunokuba ungabikho kwaphela.
Amanyathelo ama-3 kwimpendulo yeCrisis
Kwangoko ubeke umthengi ngokukhululeka kuwe baqonde ingxaki yabo. Ngapha koko, yiphindaphinde kubo ukuze bazi ngokupheleleyo ukuba uyayiqonda into engalunganga. Ukuba ukucaciswa kulungile, kuya kwenzeka kanye apho. Abathengi bafuna ukwazi ukuba umamele… kwaye unethuba elinye lokulungisa le ngxaki ke qiniseka ukuba uyayiqonda!
Qinisekisa ukuba yazi ukuba uyakhathala. Ngokuphendula kwaye ubazise ukuba ubakhathalele ngokobuqu, ungawaphosa phantsi amandla ombandela uze uwenze ube ngowakho. Awuselulo uphawu olungenabungqina, ungumntu abanokumthemba ukuzama ukulungisa ingxaki yakho.
Lungisa ingxaki. Sukubonelela ngefom, inombolo yefowuni okanye ngedilesi ye-imeyile ukuze banxibelelane nayo. Kuya kufuneka ulungise ingxaki. Wena. Ukuba uyamxukuxa lo mntu uye emntwini olandelayo, bazokukhawuleza bakuqonde ukuba uyi… i-phony. Ukuba uyayiqonda kwaye uyakhathala, uya kulandela kwaye uqiniseke ukuba umba usonjululwe.
Oko akutsho ukuba wena, ngokobuqu, kufuneka ulungise umba. Oko kuthetha ukuba uyinkokeli kunye nomntu ophendulayo kumthengi okanye kwithemba. Luxanduva lwakho ukuhambisa loo mntu ukuya kwisisombululo. Ukuba ulahla nje kwaye usebenze, izakubangela imicimbi emininzi. Awubaxabisi abantu abenza loo nto xa unengxaki… kutheni ungayenza kumthengi wakho?
Igama lokugqibela kule. Xa usombulula ingxaki, ugqibe nje elona phulo lilungileyo okhe waqala ngalo. Ukuba umshiya lo mntu onwabile kwaye anomdla, amathuba okuba babelane ngempumelelo kunye nenethiwekhi yabo. Yinto entle leyo.
tags: lawulo lweengxakiiingxaki zentlaloImidiya yokuncokolaingxaki yemidiya yoluntu
Nov 21, 2012 kwi-4: 13 AM
Le posti yebhlog ilungile ngexesha njengoko ndivele ndatyhoboza ndavula 'Ukomelela kweBrand'. Iingcebiso ezilungileyo apha esinokuthi sizinike abathengi bethu
Nov 30, 2012 kwi-2: 02 AM
Iingcebiso ezintle kunye nokubulela kakhulu ngokwabelana ngale. Ngokuqinisekileyo oku kuluncedo olukhulu kuye wonke umntu. Umsebenzi omhle!